Fampahalalana ho an'ny vahaolana fanamboarana ny habakabaka
avy amin'ny admin tamin'ny 21-06-05
Ny singa fototra mamorona ny valiny dia piramida telozoro, prisma telozoro, cubes, piramida quadrangular voahidy sns. Ireo singa fototra ireo dia azo atambatra ho endrika fisaka amin'ny telozoro, quadrilateral, hexagon, boribory, na endrika hafa. Manana ny adv ...
Ny fitsipiky ny fiasan'ny milina fanangonana mandeha ho azy H-andry sy ny tombony azon'ny milina fanangonana mandeha ho azy ao amin'ny masinina mitambatra: Ny milina fanangonana mandeha ho azy H-beam dia mampiasa fandefasana hydraulic ho an'ny fametrahana ny tranokala sy elatra, ary .. .
Fampahalalana momba ny rotator welding
Ny fantsom-pandrefesana fantsom-boaloboka dia fitaovana fanampiana mahazatra ampiasaina matetika, izay be mpampiasa amin'ny fizotry ny famokarana welding. Miantehitra indrindra amin'ny disadisa eo amin'ny fantsom-panafody sy ny roller mavitrika mba handroahana ny fihodinan'ny fantsom-pandrefesana, miaraka amin'ny weldi ...
Fampahalalana ho an'ny toeran'ny welding
Eto amin'ny firenentsika, vokatra posozy ny welding. Noho ny fahasamihafana eo amin'ny haavon'ny fampandrosoana eo amin'ny indostrian'ny famokarana, ny tobim-pamokarana orinasa marobe dia tsy miaraka amina toeran'ny welding; Mandritra izany fotoana izany, ny fikarohana mifandraika dia rel ...
Fampahalalana ho an'ny manipulator welding
Fitaovana mandefa ny lohan'ny welding na ny basy welding amin'ny toerany tokony hodiovina, na manetsika ny flux amin'ny lalana voafaritra amin'ny hafainganam-pandeha voafantina. Fampiharana manipulator welding: ny manipulator welding dia ampiasaina amin'ny fantsom-pandrefesana, ny toeran'ny welding, sns. Comb ...